चर्चित हुँन स्क्यान्डल रुचाउने र स्क्याण्डलले पछ्याउने टप ५ नेपालि अभिनेत्रिहरु – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
३. सुष्मा कार्की
केहि फिल्ममा मुख्य अभिनेत्रि भएर अभिनय गरे पनि सुष्मा मोडल र ‘आइटम गर्ल’का रूपमा बढि चर्चित छिन । उनि फरक–फरक प्रेमीका कारण र अंग प्रदर्शनका कारण बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छिन् । उनि स्वदेश र विदेशमा हुने गरेका ‘स्टेज सो’मा खुलारुपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले पनि चर्चित हुन्छिन । शुरुमा निर्देशक सुदर्शन थापासँगको सम्बन्धका र लिभिंग टुगेदरका कारण चर्चित शुष्माले सुदर्शनसँग ‘ब्रेकअप’ भएपछि अनुप्रस्थ ब्यान्डका गायक नरेन शाहीसँग बस्न थालिन । उनिहरु बिच सार्वजनिकस्थलमै कुटाकुट भएको खबरले पनि शुष्मालाइ चर्चित बनायो । नरेन संग छुट्टिएपछि भने शुष्माको बारेमा चर्चा पनि सेलाएको छ ।
४. पूजा लामा
आजकाल फिल्मक्षेत्रमा सक्रिय नभए पनि पुजा लामाको चर्चा नगरे नेपालि स्क्याण्डल क्विनको बारेमा चर्चा पुरा हुँनै सक्दैन । धेरै ट्यालेन्ट कि धनि गायिका, मोडल तथा अभिनेत्रि पुजा लामा र स्क्यान्डल सँधै संगै रहे । शुरुमा पूर्वपतिसँगको सम्बन्धविच्छेदका कारण पुजा समाचार बनिन् भने त्यस पछिका प्रेमी दिनेस डिसिले धोका दिएको भन्दै अत्यधिक मात्रामा ‘स्लिपिङ ट्याब्लेट’ खाएर आत्महत्या प्रयास गरिन। एक डिजे संगको विवादास्पद सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले तुरुन्तै बिहे गरे । तर, बिहे केही महिना पनि टिकेन । त्यसपछि पूजाले आफ्नो बौद्ध धर्म छाडी मुस्लिम धर्म अपनाए पछि फिल्म क्षेत्रबाट नै पलायन भइन ।
५. सुमिना घिमिरे
फिल्म क्षेत्रमा हुने स्क्यान्डल र चर्चाको मारमा परेर फिल्म क्षेत्रबाट नै पलायन हुन बाध्य परेकि अभिनेत्रि हुन सुमिना घिमिरे । उनलाइ निर्देशक को कोठामा फेला परेको देखि र निर्मातासंग सुटुक्क बिदेश घुम्न जानलागेका सम्मका चर्चा सिने क्षेत्रमा फैलिएका थिए । सुमिनाले छोटो समयमा धेरै फिल्म कसरि खेल्न सकिन भनेर बिभिन्न अडकल काटने पत्रकार र उनका फिल्म सफल नभएको रिपोर्ट बाट आत्तिएकि सुमिनाले पत्रकारलाइ गालि गरेको अडियोले पनि खुबै चर्चा दिलायो । उनले एक अवार्ड कार्यक्रममा बोलेको अंग्रेजि सम्बोधन पनि उडाउने पाराले चर्चा भएको थियो । अघिल्लो बर्ष सुमिनाले एक पाइलटसंग सुटुक्क बिवाह गरे पछि आजकाल उनि गायव नै भएकि छिन ।
यि ५ बाहेक अन्य थुप्रै अभिनेत्रिहरु चर्चित हुन बिभिन्न हतकण्डा लगाउँछन भने कोहि गलत कुराले चर्चित पनि बन्छन । सेक्स सक्यान्डलका कारणले चर्चित भएको कारणले आत्महत्या गर्ने अभिनेत्रिहरु श्रिषा कार्कि र ज्योति खडका ( जेशिका खडका) को बारेमा चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त देखिएन । तेस्तै बिभिन्न स्क्यान्डल गर्ने अभिनेत्रिहरुमा बिनिता बराल, पुजना प्रधान, जिया केसि, शुभेच्छा थापा, निशा अधिकारी, प्रियंका कार्कि, बेनिशा हमाल, जेनिशा केसि आदिको नाम पनि आँउछ ।
यो लिष्ट तयार गर्न ट्विटरका साथिहरुले पनि सहयोग गर्नु भएको थियो । पोलमा भोट गर्ने र कमेन्ट अनि मेसेजमा जानकारि दिएर सहयोग गर्ने सबै ट्विटर मित्रहरुलाइ मुरि मुरि धन्यबाद ।
Top 10 scandalous Nepali actress को को होलान ? १. रेखा २ (कस्लाइ रखौं ? )
— Anand Nepal (@AnandNepal) December 29, 2015
This entry was posted in Artists, चलचित्र and tagged Namrata Shrestha, Pooja Lama, Rekha Thapa, scandal, Sumina Ghimire, Sushma Karki. Bookmark the permalink.
← प्रधानमन्त्रि निवास बालुवाटारमा फुलै फूलको मौसम; ओलिले निरोलाइ फिक्का पारेको आरोप
श्रीकृष्णको जन्मदिनमा अनाथ बालबालिकालाइ न्यानो कपडा बितरण, स्वेताको अभिनयमा फर्कने तयारि →